Ohatrinona ny vidinao sy ny habetsaky ny kaomandinao (MOQ)?
Manome mivantana ny vidin'ny orinasa izahay arakaraka ny habetsany, ny MOQ dia singa 1;
Eny isika no mpanamboatra matihanina sy mpanondrana miaraka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, marketing ary serivisy; manana traikefa manan-karena sy fanangonana fahalalana amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy mihoatra ny 11 taona isika; orinasa dia voamarina mpamatsy azo antoka avy amin'ny TUV sy SGS malaza eran-tany;
Inona avy ireo fitaovanao lehibe?
Ny orinasanay dia mifantoka amin'ny kalitaon'ny fitaovana hatsaran-tarehy, ny tena fitaovantsika dia misy laser 808nm diode, laser miisa CO2, laser Q switch yag, fitaovana hihena amin'ny hoditra cryo, 360 cryolipolysis, RF Thermagic, OPT, fitaovana maro hafa sns;
Inona ny fiantohana ny vokatrao?
Raha ny mahazatra dia manolotra fiantohana 1-2 taona isika araka ny karazana milina isan-karazany; mandritra ny fiantohana dia alefa maimaimpoana sy soloina ny kojakoja;
Ho an'ny kaomandy farafahakeliny matetika ny fotoananay mitarika dia 3-7 andro, fa ny filaharana betsaka dia miankina amin'ny toe-pamokarana ankehitriny sy ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana;
Mazava ho azy fa manaiky ny famindrana banky (T / T) isika, ny fandoavam-bola an-tserasera, ny fiombonamben'ny sendika, fa ny fomba fandoavam-bola hafa dia afaka miresaka bebe kokoa;
Fametrahana 50%, fifandanjana 50% alohan'ny fanaterana;
Inona ny fomba fandefasana sy ny saram-pandefasana?
Fomba fandefasana entana matetika ho an'ny referansa: ny mpanjifa dia misafidy fifamoivoizana haingana amin'ny tolotra isan-trano, na ny zotram-piaramanidina mifaninana isam-baravarana na serivisy an-dranomasina mora vidy isam-baravarana; ny saram-pandefasana dia tsy mitovy amin'ny fomba fandefasana etsy ambony, raha mila tsipiriany azafady manontania anay;
Misy serivisy OEM sy ODM?
Eny, misy ny karazany roa karazana orinasa, inona koa, satria ny mpanamboatra dia mbola afaka manome vahaolana feno isika ao anatin'izany ny famolavolana lozisialy, famolavolana fitaovana, famolavolana vatana, famolavolana firafitra ho an'ny takiana namboarina; tongasoa eto amin'ny fanontanina;
hiaraka aminay, mamorona ny ho avy hatsaran-tarehy mamirapiratra;